Jebinta 50 sano ee dhaqanka, InverPad waa teknolojiyad asal ah oo ay soo saartay Aquark. Iyada oo loo adeegsanayo isku-dhafka kaamil ah ee naqshad Pad, Stepless-DC-Inverter iyo tikniyoolajiyada dhawaqa-dhawaqa, waxay wanaajineysaa waayo-aragnimada dabaasha ilaa marxalad cusub.
Ku raaxayso aamusnaanta saxda ah
Masaafada 1 mitir, khibradaha heerarka dhawaaqa u hooseeya sida:
36.5dB (A)Qaabka aamusnaanta
46dB (A)Xaaladda Kordhinta
DHAQANKA DC INTERTER
Stepless DC Inverter wuxuu u oggolaanayaa kombuyuutarka inuu ku habeeyo xawaaraha ku saleysan baahida iyo shuruudaha dhabta ah. Soo noqnoqoshada iyo RPM ayaa lagu hagaajin karaa midba midka kale si loo bixiyo waxqabadka kaydinta tamar yaabka leh iyo aamusnaanta aadka u daran.
BARBARO DHAQAN >>
Beerta kuleylka Khamriga Kulul ee InverMax 60 / 110kw
AquaMini-Pool Heat saar
Hubi waxa naga socda!
Wed-Jul-2021 Akhri wax dheeraad ah
Tue-Jul-2021 Akhri wax dheeraad ah
Thu-Jul-2021 Akhri wax dheeraad ah
Waxaan kor u qaadnay iibka kuleylkayaga kuleylka 3 markii aan u mahadcelinay Mr. Silence. Markay macaamiisha ku arkaan qolkayaga qolka, waxay kuxiran yihiin xargaha qaaliga ah ee aluminium. Ka dib markaa waa inay maqlaan markay u rogayaan inay tahay wax soo saar weyn. Waxaan nahay su ...
“Ganacsatada reer Hangari Kerex iyo macaamiisha horeyba u haystay Mr. Silence waxay u qireen qaabeynteeda gaarka ah. Runtii waxay umuuqataa sida cod qaade maqaayada riwaayadaha! Waxa la yaab leh oo ku kala duwan sheyga ka soo baxa tartamayaasha ayaa ah qalliinka aadka u daran ee aamusnaanta ...